Ị̀ Na-ahụ Ụgbọ Ịnyịnya Na-acha Ọkụ Ọkụ Ịlaịsha Hụrụ? | Nke A Na-amụ Amụ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Eze ndị Sirịa nọ na-achọ onye amụma Chineke aha ya bụ Ịlaịsha ka o jide ya. Ọ nụrụ na Ịlaịsha nọ n’obodo Dotan, nke dị n’elu ugwu, nweekwa mgbidi gburugburu ya. N’abalị, o zigara ịnyịnya, ụgbọ agha, na ìgwè ndị agha n’obodo ahụ. Tupu chi abọọ, ndị agha ahụ agbaala obodo ahụ gburugburu.—2 Eze 6:13, 14.
Mgbe onye na-ejere Ịlaịsha ozi tetara, ọ pụrụ èzí ma hụ ndị bịara ịnwụchi ha. Ụjọ bịara ya, ya etie mkpu, sị: “Ewoo, nna m ukwu! Gịnị ka anyị ga-eme?” Ịlaịsha gwara ya, sị: “Atụla egwu, n’ihi na ndị anyị na ha nọ karịrị ndị ha na ha nọ.” Mgbe Ịlaịsha kwuchara ihe a, ya ekpee ekpere, sị: “Jehova, biko, meghee anya ya ka ọ hụ ụzọ.” Baịbụl gwara anyị ihe merenụ. Ọ sịrị: “Ozugbo, Jehova meghere anya onye ahụ na-eje ozi, o wee hụ; ma, lee! ógbè ahụ bụ́ ugwu ugwu jupụtara n’ịnyịnya na ụgbọ ịnyịnya agha na-acha ọkụ ọkụ gburugburu Ịlaịsha.” (2 Eze 6:15-17) Gịnị ka anyị akụkọ a na akụkọ ndị ọzọ a kọrọ gbasara Ịlaịsha na-akụziri anyị?
Ụjọ atụghị Ịlaịsha mgbe ahụ ndị agha Sirịa gbara ya gburugburu n’ihi na ọ tụkwasịrị Jehova obi, marakwa na Jehova agaghị ekwe ka aka kpara ya. Anyị anaghị atụ anya taa ka Jehova rụọrọ anyị ọrụ ebube, ma o doro anyị anya na ọ na-echebe ndị na-efe ya. Anyị nwere ike ikwu na ịnyịnya na ụgbọ ịnyịnya ndị na-acha ọkụ ọkụ gbara anyị gburugburu. Ọ bụrụ na anyị atụkwasị Jehova obi ma nwee okwukwe na ọ na-echebe ndị na-efe ya, ụjọ agaghị atụ anyị. Ọ ga-agọzikwa anyị. (Ọma 4:8) Ka anyị tụlee otú ihe ndị ọzọ a kọrọ gbasara Ịlaịsha ga-esi baara anyị uru.
OTÚ ỊLAỊSHA SI MALITE IJERE ỊLAỊJA OZI
O nwere otu ụbọchị Ịlaịsha nọ na-akọ ugbo, Ịlaịja abịa wụkwasị ya uwe e ji mara ya. Ịlaịja ji ihe ahụ o mere gwa Ịlaịsha ka ọ bịa jewere ya ozi. N’ihi ya, Ịlaịsha mere oriri, gwa papa ya na mama ya ka ha nọrọ nke ọma, ma gawa ijere Ịlaịja ozi. (1 Eze 19:16, 19-21) Ịlaịsha wepụtara onwe ya ịrụ ọrụ ọ bụla Chineke sị ya rụọ. N’ihi ya, Jehova ji ya rụọ ọtụtụ ihe, mechaakwa họpụta ya ka ọ bụrụ onye amụma nọchiri Ịlaịja.
Ịlaịsha jeere Ịlaịja ozi ihe dị ka afọ isii. Oge ahụ Ịlaịsha na-ejere ya ozi, ọ bụ ya ‘na-awụsa mmiri n’aka Ịlaịja.’ (2 Eze 3:11) N’oge ahụ, ndị mmadụ na-eji aka nkịtị eri nri. Ha anaghị eji fọk, mma, ma ọ bụ ngajị eri nri. Ọ na-abụkwa onye nwere ohu richaa nri, ohu ya awụsara ya mmiri ka ọ kwọọ aka. N’ihi ya, o nwere ike ịbụ na ọrụ ụfọdụ Ịlaịsha na-arụrụ Ịlaịja bụ ọrụ ndị mmadụ na-eleda anya. Ma, o weere ya na ozi ọ na-ejere Ịlaịja bụ ihe ùgwù.
Taa, ọtụtụ Ndịàmà Jehova na-ewepụtakwa onwe ha na-eje ozi oge niile. Ihe mere ha ji eme otú ahụ bụ na ha nwere okwukwe na Jehova, chọọkwa iji obi ha niile na-ejere ya ozi. Ụfọdụ n’ime ha na-ahapụ ụlọ ha gaa jewe ozi na Betel ma ọ bụkwanụ soro na-arụ Ụlọ Nzukọ Alaeze, Ụlọ Mgbakọ, na alaka ụlọ ọrụ. Ha nwere ike ịna-arụ ọrụ ndị ọzọ ledara anya. Ma, anyị ekwesịghị ileda ọrụ ha anya n’ihi na Jehova anaghị eji ọrụ ha na-arụ egwu egwu.—Hib. 6:10.
ỊLAỊSHA AHAPỤGHỊ ỌRỤ YA
Tupu Chineke ‘eburu Ịlaịja n’oké ifufe gaa n’eluigwe,’ ọ gwara ya ka o si Gilgal gaa Betel. Ịlaịja gwara Ịlaịsha ka ọ ghara iso ya, ma Ịlaịsha gwara ya, sị: “Agaghị m ahapụ gị.” Mgbe ha nọ n’ụzọ, Ịlaịja gwara ya ugboro abụọ ọzọ ka ọ laghachi, ma o kweghị. (2 Eze 2:1-6) Ịlaịsha ekweghị ahapụ Ịlaịja otú ahụ Rut na-ahapụghị Neomi. (Rut 1:8, 16, 17) Gịnị mere na ọ hapụghị ya? Ịlaịsha weere na ijere Ịlaịja ozi bụ ihe ùgwù n’ihi na ọ bụ ọrụ Chineke nyere ya.
Anyị kwesịrị ịmụta ihe n’ihe Ịlaịsha mere. Ọ bụrụ na e nye anyị ọrụ n’ọgbakọ, anyị ga-eji obi anyị niile na-arụ ya ma ọ bụrụ na anyị echeta na ọ bụ Jehova ka anyị na-arụrụ ya. O nweghị ihe ùgwù ka ijere Jehova ozi.—Ọma 65:4; 84:10.
“RỊỌ IHE M GA-EMERE GỊ”
Ka Ịlaịja na Ịlaịsha nọ n’ụzọ na-aga Betel, Ịlaịja gwara Ịlaịsha, sị: “Rịọ ihe m ga-emere gị tupu e wepụ m n’ebe ị nọ.” Ịlaịsha rịọrọ ya otu ihe ga-enyere ya aka ịna-ejekwuru Jehova ozi, nke yiri ihe ahụ Sọlọmọn rịọrọ Jehova ọtụtụ afọ tupu mgbe ahụ. Ịlaịsha rịọrọ ya ka ‘ya nweta òkè abụọ nke mmụọ ya.’ (1 Eze 3:5, 9; 2 Eze 2:9) N’oge ochie, ọ bụrụ na onye Izrel ekewere ụmụ ya ndị nwoke ihe, ọ ga-enye ọkpara ya òkè abụọ n’ihe niile o nwere. (Diut. 21:15-17) N’ihi ya, Ịlaịsha na-arịọ Ịlaịja ka ya bụrụ onye amụma ga-anọchi ya. Ihe mere o ji rịọ ka ya nwee mmụọ Ịlaịja, ya bụ, ka ya na-akpa àgwà ka ya, bụ na ọ chọrọ inwe ụdị obi ike Ịlaịja nwere. Ọ chọkwara iji obi ya niile na-akwado ofufe Jehova otú ahụ Ịlaịja si kwado ya.—1 Eze 19:13, 14.
Gịnị ka Ịlaịja mere mgbe Ịlaịsha rịọrọ ya ihe ahụ? Ọ gwara ya, sị: “Ị rịọwo ihe siri ike. Ọ bụrụ na ị hụ m mgbe a na-ewepụ m n’ebe ị nọ, ọ ga-emere gị otú ahụ; ma ọ bụrụ na ị hụghị m, ọ gaghị eme otú ahụ.” (2 Eze 2:10) Ịlaịja bu ihe abụọ n’obi zaa ya ihe a ọ zara ya. Nke mbụ bụ na ọ bụ naanị Chineke nwere ike ikwu ma Ịlaịsha ọ̀ ga-enweta ihe a ọ rịọrọ Ịlaịja. Nke abụọ abụrụ na ọ bụrụ na Ịlaịsha chọrọ inweta ihe ahụ ọ rịọrọ, o kwesịghị ịhapụ Ịlaịja, ihe ọ sọkwara ya mee.
IHE ỊLAỊSHA HỤRỤ
Chineke ò meere Ịlaịsha ihe ahụ ọ rịọrọ? Baịbụl kwuru, sị: “O wee ruo na, ka ha nọ na-aga, na-ekwu okwu ka ha na-aga, lee! ụgbọ agha na-acha ọkụ ọkụ na ịnyịnya ndị na-acha ọkụ ọkụ, ha wee kewaa ha abụọ; Ịlaịja wee rịgoro n’eluigwe n’oké ifufe. N’oge ahụ, Ịlaịsha nọ na-ahụ ya.” * Ọ bụ otú a ka Jehova si meere Ịlaịsha ihe ahụ ọ rịọrọ. Ịlaịsha hụrụ mgbe a kpọpụrụ Ịlaịja. O nwetara òkè abụọ nke mmụọ Ịlaịja, mechaakwa bụrụ onye amụma nọchiri ya.—2 Eze 2:11-14.
Oge ahụ a na-akpọpụ Ịlaịja, uwe e ji mara ya dapụnahụrụ ya. Ịlaịsha chịịrị uwe ahụ yiri. Ọ bụ uwe ahụ ka ndị mmadụ ji mara na ọ bụzi onye amụma Chineke. O mechakwara mee ihe ọzọ gosiri na ọ bụ onye amụma Jehova. Ọ rụrụ ọrụ ebube, kewaa Osimiri Jọdan.
O doro anya na o nweghị ihe ga-eme ka Ịlaịsha chefuo ihe ọ hụrụ mgbe ahụ oké ifufe bupụrụ Ịlaịja. O nweghị onye ga-ahụ ụgbọ ịnyịnya agha na ịnyịnya na-acha ọkụ ọkụ, ya aghara iju ya anya. Ma, ihe ndị a Ịlaịsha hụrụ mere ka ọ ghọta na Jehova emeerela ya ihe ọ rịọrọ. Anyị anaghị ahụ ụgbọ ịnyịnya na ịnyịnya na-acha ọkụ ọkụ ma Chineke zaa ekpere anyị. Ma, anyị nwere ike ịghọta na Chineke ka na-eji ike ya na-enweghị atụ enyere anyị aka ime uche ya. Ọ bụrụkwa na anyị ahụ otú Jehova si na-agọzi nzukọ ya nke a na-ahụ anya, ọ dị ka à ga-asị na anyị na-ahụ ụgbọ ịnyịnya ya ka ọ na-aga n’ihu n’ihu n’eluigwe.—Ezik. 10:9-13.
E nwere ọtụtụ ihe mere ka o doo Ịlaịsha anya na Jehova nwere ike na-enweghị atụ. Mmụọ nsọ Jehova nyeere ya aka, ya arụọ ọrụ ebube iri na isii. Ọrụ ebube ndị ọ rụrụ ka ndị nke Ịlaịja rụrụ okpukpu abụọ. * Mgbe ọzọ Ịlaịsha hụrụ ịnyịnya na ụgbọ ịnyịnya na-acha ọkụ ọkụ bụ mgbe ahụ ndị agha Sirịa gbara ya gburugburu na Dotan.
ỊLAỊSHA TỤKWASỊRỊ JEHOVA OBI
Ụjọ atụghị Ịlaịsha n’agbanyeghị na ndị iro gbara ya gburugburu na Dotan. Ọ bụ n’ihi gịnị? Ọ bụ n’ihi na o nwere okwukwe siri ike na Jehova ga-anapụta ya. Anyị kwesịkwara inwe ụdị okwukwe ahụ. N’ihi ya, ka anyị na-ekpe ekpere ka Chineke nye anyị mmụọ nsọ ya ka anyị nwee ike ịna-enwe okwukwe ma na-akpa àgwà ndị ọzọ so ná mkpụrụ nke mmụọ nsọ.—Luk 11:13; Gal. 5:22, 23.
O doro anya na ihe ahụ mere na Dotan mere ka Ịlaịsha ghọta na ya kwesịrị ịna-atụkwasịkwu Jehova na ndị mmụọ ozi ya obi. Ịlaịsha ghọtara na ọ bụ Chineke zitere ndị mmụọ ozi ahụ gbara obodo Dotan gburugburu ma chebe ya ka ndị iro ya ghara ịnwụchi ya. Chineke rụrụ ọrụ ebube zọpụta Ịlaịsha na onye na-ejere ya ozi. O mere ka ndị iro Ịlaịsha kpuo ìsì. (2 Eze 6:17-23) Ma mgbe ahụ Ịlaịsha nọ ná nsogbu ma n’oge ndị ọzọ, o nwere okwukwe siri ike na Jehova ma tụkwasị ya obi.
Anyị kwesịrị ịtụkwasị Jehova Chineke obi otú ahụ Ịlaịsha tụkwasịrị ya obi. (Ilu 3:5, 6) Anyị mee otú ahụ, “Chineke ga-emere anyị amara wee gọzie anyị.” (Ọma 67:1) Ọ bụ eziokwu na ụgbọ ịnyịnya na ịnyịnya ndị na-acha ọkụ ọkụ agbaghị anyị gburugburu taa, Jehova na-echebe ndị na-efe ya. Ọ ga-echebekwa ha ‘n’oké mkpagbu’ ahụ na-abịanụ. (Mat. 24:21; Mkpu. 7:9, 14) Tupu oge ahụ eruo, ka anyị na-echeta mgbe niile na “Chineke bụụrụ anyị ebe mgbaba.”—Ọma 62:8.
^ para. 16 Ebe a kpọgara Ịlaịja abụghị eluigwe ebe Jehova na ndị mmụọ ozi ya bi. Gụọ Ụlọ Nche September 15, 1997, peeji nke 15.
^ para. 19 Gụọ Ụlọ Nche August 1, 2005, peeji nke 10.
MMERI ỤFỌDỤ ANYỊ NWERE N’ỤLỌIKPE N’OGE NA-ADỊBEGHỊ ANYA
243 — N’ụwa niile, ihe a bụ ugboro ole Ndịàmà Jehova meririla na nso nso a n’ụlọikpe dị elu
Nde Dọla Asatọ na Narị Puku Dọla Abụọ
Ihe a bụ ego niile gọọmenti Frans kwụghachiri Ndịàmà Jehova n’abalị iri na otu n’ọnwa Disemba n’afọ 2012 n’ihi ikpe ha na gọọmenti Frans na-ekpe kemgbe afọ iri na ise
Ụlọikpe Kacha Elu na Gris
N’abalị abụọ n’ọnwa Novemba n’afọ 2012, ụlọikpe a kwuru na Ndịàmà Jehova nwere ike ịrụ Ụlọ Nzukọ Alaeze na Ụlọ Mgbakọ na Gris
20 — Ihe a bụ ugboro ole anyị meriri n’Ụlọikpe Na-ahụ Maka Ihe Ruuru Mmadụ na Yurop kemgbe ọnwa Eprel afọ 2000
Ihe Òtù Mba Ụwa Na-ahụ Maka Ihe Ruuru Mmadụ Kpebiri Gbasara Saụt Koria
N’abalị iri abụọ na ise n’ọnwa Ọktoba n’afọ 2012, e nyere gọọmenti Saụt Koria iwu ka o nye narị Ndịàmà Jehova atọ na iri asatọ na asatọ jụrụ ịga agha n’ihi akọnuche ha ego iti aka n’obi maka otú e si mekpọọ ha ọnụ